Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zase-Australia eziQhekezayo » Iklabhu yaseWyndham Flynns Beach Resort iphindwe kabini ngobukhulu
Iindaba zase-Australia eziQhekezayo • Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • Resorts
Iklabhu yaseWyndham Flynns Beach ikulungele ukuzisa abahambi ngakumbi kwingingqi yePort Macquarie. IPort Macquarie yidolophu eselunxwemeni kwindawo yolawulozidolophu yasePort Macquarie-Hastings. Ime kwi-Mid North Coast ye-New South Wales, e-Australia, malunga ne-390 km kumantla eSydney, kunye ne-570 km kumazantsi eBrisbane, e-Australia.
Uphuhliso lweClub Wyndham Flynns Beach longeze i-53 enye ukuya kumagumbi okulala amane, kunye nama-20 abekwe njengeDeluxe, ama-25 njengoGrand, kunye nesibhozo njengoMongameli. Amagumbi amane okuhlala kaMongameli, ngokukodwa, ayilelwe njengemveliso engenakuthelekiswa nanto ngaphakathi kommandla, enamagumbi okulala amane avulekileyo, izindlu zangasese ezine, ikhitshi elipheleleyo, indawo yokuhlamba iimpahla, umgangatho wabucala womgangatho ongaphandle kunye ne-spa yangaphandle, kunye nebhalkoni enkulu ephezulu. , kunye nokufakwa okuphezulu kunye nokugqiba.
Ngaphezulu kweminyaka emibini, i-25 yezigidi zophuhliso lubonelele ngengqesho kubarhwebi abangama-220 kunye neengcali kwaye bandise indawo yokuhlala yabakhenkethi baba ngamagumbi ali-113 kunye neendawo zokuhlala. Le projekthi ikwabona ukwenziwa kwekhefi entsha, indawo yemidlalo, ichibi labantwana, indawo zokuhlala eziqhelekileyo kunye nokupaka iimoto, kunye nendawo yokuzivocavoca ehlaziyiweyo kunye nolwamkelo olulungisiweyo.
“Phambi kolu phuhliso kunye nobhubhane we-COVID-19, indawo yabakhenkethi yafumana amanqanaba okuhlala ngaphezulu kweepesenti ezingama-90 ngokomyinge kwaye yanikela nge-20 yezigidi ngonyaka kuqoqosho lwasekhaya ngokuthe ngqo okanye ngokungathanga ngqo ngokusebenzisa inkcitho yeendwendwe- inani esilindele ngoku ukwanda, ”utshilo uBarry Robinson, uMongameli kunye noMlawuli oPhetheyo, ukuSebenza kwaMazwe ngaMazwe eWyndham Destinations.
“Ngokudibanisa le ndawo yokuhlala ipremiyamu, sidala amaziko amatsha eendawo zokuphumla size siphucule esele sikhona, sikholelwa ekubeni izakutsala ibango elikhulu lendawo yethu yokuchithela iiholide kwaye, ngokwenza njalo, siza kukhuthaza ubuhle bePort Macquarie, eya kuthi inike amandla kwi-post-COVID yommandla. -19 ukuchacha. ”
Iprojekthi iqale ngoMeyi 2019 kodwa umphuhlisi, iWyndham Destination Asia Pacific, uthathe isigqibo sokuqhubekeka nemisebenzi ngexesha lobhubhane we-COVID-19 ngolindelo lokuba indawo leyo iya kuphinda ichache.
"Olu phuhliso lungaphezulu kwe-25 yezigidi zeedola lubonisa ukuzithemba kwe-Wyndham Destination kwiPort Macquarie Hastings njengendawo ehamba phambili kwezokhenketho eNew South Wales," utshilo uSodolophu uPeta Pinson.
“Iprojekthi ibonelele ngenkuthazo yezoqoqosho eyamkelwe kakhulu luluntu lwethu, imisebenzi engaphezulu yendawo kunye nomtsalane omtsha kubakhenkethi bethu. Olu longezo olukhulu kwingingqi yethu, ngokudibeneyo neprojekthi yezigidi zeedola ezibonwa ngummandla wethu ngeli xesha. ”
Iklabhu yaseWyndham Flynns Ibhantshi ibekwe kuNxweme oluseMantla oMbindi weNew South Wales, uhambo nje lweyure enye okanye iiyure ezine ukusuka eSydney. Inika uluhlu lwezinto eziluncedo, amanyathelo afanelekileyo osapho kunye nokuqesha ngokuncomekayo kuluhlu lwezixhobo zangaphandle kunye nemidlalo.
Iklabhu yaseWyndham South Pacific ilawulwa ziindawo ekuyiwa kuzo eWyndham Asia Pacific, inxenye